अनौठो गाउँ : जहाँ छोरीहरु मात्र जन्मछन् – Naya Kura Daily
July 24, 2020 230
के तपाईले कुनै यस्तो गाउँको बारेमा सुन्नु भएको छ, जहाँ केबल छोरीहरु मात्र जन्मछन् । पोल्याण्ड र चेक रिपब्लिक को सिमामा एउटा यस्तो अनौठो गाउँ बसेको छ, जहाँ केबल छोरीहरु मात्र जन्मछन् । यो गाउँमा पछिल्लो ९ बर्षदेखी कुनै पनि छोरी जन्मिएका छैनन् ।
यो गाउँको नाम हो मिजेस्के ओद्रजेनस्की । यहाँ अन्तिम पटक सन २०१० मा एक जना छोराको जन्म भएको थियो तर त्यसपछि छोरा पाउने परिवारले त्यो गाउँ छोडेर दोस्रो गाउँमा गएर बसे । यहाँको जनसंख्या हाल ३०० नजिक छ, जसमा सबैजसो छोरीहरु छन् ।
यो गाउँमा हाल सबैभन्दा कम उमेरका छोरा १२ बर्षका छन् । मिडिया रिपोर्टको अनुसार, यहाँ छोरीहरु त प्राय जन्मि रहन्छन, तर छोरा मान्छे जन्मनु धेरै दुर्लभ छ । यही कारण हो कि यहाँका मेयर रेजमण्ड फ्रिशकोले जसको घरमा छोरा जन्मन्छ त्यसलाई इनाम दिने घोषणा समेत गरेका छन् ।
गाउँले हरुले अहिलेसम्म आफुले छोरीहरु मात्र जन्मने कारणको विषयमा अहिलेसम्म केही थाहा पाउन नसकेको बताए । यद्यपी, पोल्याण्डको राजधानी वारसाको एक विश्व विद्यालयले यो रहस्य जान्नको लागी रिसर्च समेत शुरु गरेको छ ।
वारसाँ की मेडिकल युनिभर्सिटिका प्रोफेसर रफाल प्लोस्कीका अनुसार, गाउँमा छोरा जन्मी रहेका छैनन, यो अनौठो घटना त हो नै, साथै धेरै चिन्ताको बिषय पनि हो । उनका अनुसार, यो रहस्यको समाधान खोज्नु् सजिलो छैन । यसको लागी गाउँका सबै पुराना रेकर्डहरु हेनुर्् पर्ने हुन्छ । यसको अलावा छोरीहरुका आमा–बुबाका बिच कुनै पछिल्लो सम्बन्ध छ वा छैन, यानी उनीहरु बिच टाढाको सम्बन्ध त छैन, यो पनि जान्नु आवश्यक हुन्छ ।
Prevधन कमाउन विदेश गएको पाँच महिनामा गलकोटका लक्ष्मणको शव आयो
Nextप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
लिपुलेक पासमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड नै तैनाथ, नयाँ दिल्लीमा तरंग
कोरोना कहरकाबीच टुँडिखेलमा फूलपाती बढाइँ (फोटो फिचर)
चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको आज जन्मदिन: यस्ता छन् धेरैलाई थाहा नभएका उनका जीवनका आरोह अवरोह ! Happy Birthday Rabi Lamichhane????????
भर्खरै जन्मिएको छोरालाई मार्न अमाजुले यस्तो खेल खेलीन् (3348)